जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुले दीर्घरोगीलाई बुस्टर डोज दिन विज्ञको सुझाव Global TV Nepal
काठमाडौं,मङ्सिर २२गते । जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुले दीर्घरोगीलाई कोरोना महामारीविरुद्धको खोपको बुस्टर डोज दिन सुझाव दिएका छन् ।
एचआईभी एड्स, क्यान्सरलगायत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास आउने रोग लागेकाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोपको बुस्टर डोज दिन विज्ञहरुले सुझाव दिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बुधबार परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेककुमार लालले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएपनि केही विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरुमा रोग प्रतिरोधी क्षमता पर्याप्त नहुने भएकाले त्यस्तालाई बुस्टर डोज दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्राप्त प्रमाण, अनुसन्धान एवं डब्ल्यूएचओको सिफारिस र नेपालको परिवेश हेरेर दिने सल्लाह अनुसार नै बुस्टर डोजबारे सरकारले निर्णय लिने डा. लाल बताउँछन् ।
हालसम्म क्यान्सरका बिरामी, अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा ह्रास आउने बिरामीलाई बुस्टर डोज दिन डब्ल्यूएचओले सिफारिस गरेको स्मरण उनले गराए ।
चीनमा विकास भएको भेरोसेल खोपको दुवै डोज लगाएका ६० वर्षमाथिका व्यक्तिलाई दोस्रो डोज लगाएको तीन महिनापछि थप एक डोज खोप दिन डब्ल्यूएचओले सिफारिस गरेको पनि डा. लालले सुनाए ।नेपालमा हालसम्म कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत र १८ वर्षमाथिका ६२ प्रतिशत जनसंख्याले कम्तीमा एक डोज खोप लगाएका छन् ।
थप २७४५ मा कोरोना पुष्टि, ४१ को मृत्यु
पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए २३५ संक्रमित, ४ को मृत्यु